တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ်လက်စွဲစာအုပ် Push ကို Button ကိုပြောင်းလဲမည် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Push ကို Button ကိုပြောင်းလဲမည်,လျှပ်စစ် Push ကို Button လေး,manual Push ကို Button လေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > အခွားသောတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ်လက်စွဲစာအုပ် Push ကို Button ကိုပြောင်းလဲမည်
ထွက်နိုင်ရေး: 10000 per month
HS Code ကို: 8535301000
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ်လက်စွဲစာအုပ် Push ကို Botton ပြောင်းလဲမည်
Q1: ငါစမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်နမူနာ get နိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ဖောက်သည် '' အခြမ်းမှာကအခပေးရပါမည်အခမဲ့နမူနာပေမယ့်ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
Q2: ငါထုတ်ကုန်အပေါ်မှာငါ့လိုဂို print ထုတ်နိုင်ပါသလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်ရရှိနိုင်ကြသည်။
Q3: ငါဘယ်လိုပြီးနောက်-service ကရနိုင်မလဲ?
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏ products100% Self-စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ထုပ်ပိုးမီ။
ဖြေ 2-7 ရက်အတွင်းသိုက်ရတဲ့ပြီးနောက်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > အခွားသောတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း
အီလက်ထရောနစ် 24GHz အလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Radar Detector အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Geomagnetic မော်တော်ကားယာဉ် Loop Detector အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ်လက်စွဲစာအုပ် Push ကို Button ကိုပြောင်းလဲမည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hofic အီလက်ထရောနစ် 10GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar အာရုံခံဆွဲယူ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Autonics စီးရီး fiber optic အာရုံခံ Photocell အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Push ကို Button ကိုပြောင်းလဲမည် လျှပ်စစ် Push ကို Button လေး manual Push ကို Button လေး အေးသိုလှောင်ကုလားကာ PVC ဂိတ်အလိုအလျောက်ခေါက် အေးသိုလှောင်ဂိုဒေါင် Warerhouse အေးသိုလှောင်တံခါး PVC အော်တိုပြုပြင်ခြင်းတံခါး